Tag: ilaha faahfaahinta | Martech Zone
Tag: ilaha macluumaadka
Axad, Nofeembar, 13, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Suuq-geynta suuq-geynta ayaa isha ugu weyn ku leh Martech. Si aad u badan ayaan u dajiyay ogeysiisyada Google ee loogu talagalay ereyga 'infographic' waxaanan dib u eegay maalintii oo dhan. Maaddaama sawir-qaadashada ay noqotay mid caan ah, warshadaha waxyaabaha ku jira waxaa hareeyay faahfaahin aan fiicnayn… markaa aad ayaan u xiisaynaa waxa aan wadaagno ama wadaaginno si aan u hubinno inaan mar walba bixinno qiimo. Aasaaska Infographic Waa maxay infographic? 10 sababaha sawiradu waa inay ahaadaan
Maxay tahay sababta aan Shabakad loogu xiriirin Manhaj kasta?
Monday, July 21, 2008 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Galabtaan waxaa laygu casuumay qado aan caadi aheyn iyo dood aan laleeyahay Indiana Business College Harrison College. Indiana waxay caan ku tahay haysashada qaar ka mid ah iskuulada ugu wanaagsan dalka, iyo adduunka, laakiin dadka Harrison waxay garwaaqsan yihiin inaan ku jirno adduun si dhaqso leh isu beddelaya. Waxay sameynayaan riix dagaal si ay u hubiyaan inay ka sii hormari doonaan qallooca. Intii aan wada hadlaynay, waxaan gartay inay jirto hal qalab oo dhalaalaya
Khamiis, May 22, 2008 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Faa'iidooyinka mid ka mid ah (dadka qaarkiis waxay u haystaan ​​inkaar) in farsamo ahaan la qabatimay, si xariifnimo ku jirto, ayaa ah in dadka kale oo dhami ay markasta kaa codsanayaan caawimaad. Saaxiibkeyga wanaagsan iyo saaxiibkey Hoosier, Patric aka Mr. Noobie, wuxuu si buuxda diyaar ugu yahay inuu culeyskan garbahaaga ka qaado! Patric wuxuu lahaa degel sii kordhaya, Noobie, sanadkii la soo dhaafay laakiin waa qaab cusub oo dib loo habeeyay oo soo bandhigiddu waa wax cajiib ah! Noobie, Inc. wuxuu leeyahay qaamuus, maqal iyo muuqaal